Ungawukhuphela njani uMculo kwiYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungawukhuphela njani umculo kwiYouTube?
Meyi 9, 2021 0 IiCententarios 267
I-YouTube iyaqhubeka yomeleza yonke imihla, enkosi ngokwahluka kwayo okukhulu iividiyo Babonisa umxholo obalulekileyo kubasebenzisi bakho. Ukusuka kwiindlela zokupheka ezintle ukuya kwingcebiso yezilwanyana, ngaphandle kwamathandabuzo, kukho amathuba amaninzi abasebenzisi bayo bokufunda ulwazi olutsha kwintuthuzelo yekhompyuter yabo exhunywe kwi-intanethi.
Kodwa baninzi abantu abanomdla wokukhuphela umculo Tube, kwaye xa ufuna ukurekhoda ingoma, ividiyo okanye imovie eyalayishwa ngomnye umsebenzisi kweli qonga, ungasebenzisa iindlela ezininzi eziluncedo kunye nokuququzelela yonke le nkqubo.
Khuphela iividiyo ezivela kuwe ngeTyhubhu ukuya kwiKhompyuter
Kubalulekile ukusebenzisa isicelo sokukhuphela iividiyo zikaYouTube kwikhompyuter kwaye yeyona ndlela inceda ukuseka ulawulo ngexesha lenkqubo yokukhuphela. ukukhutshwa, enika ukhuseleko ngakumbi kubasebenzisi. Kuya kufuneka ukope kwaye uncamathisele i-URL yevidiyo ekhethiweyo kwiqonga le-You Tube.
Kwiividiyo ze-HD, iifayile ze ifomathi i-MP4 ngokubanzi, kwaye kwimeko yeevidiyo ezikumgangatho ongcono, ifomathi esetyenziswa kakhulu yiMKV. Isoftware yedesktop ikuvumela ukuba uguqule iividiyo zeYouTube zibe yiMP3 kunye neMP4, ngakumbi kuba banceda ukukhetha ifomathi kunye nomgangatho wokukhuphela.
Ukhuphelo lomculo lunokwenziwa kwiphepha lewebhu elikhethekileyo
Ezinye iingcali zobuchwephesha zicebisa ukusebenzisa iVLC Media Player ukukhuphela iividiyo zeYouTube kwiPC. Inkqubo iqalwa ngokukopa i-URL yevidiyo oyifunayo kwaye ivule iVLC. Emva kokuvula, kuya kufuneka unike "konqakrazo”KuMbindi> Vula, indawo ekuyo bomvu. Apho ithi "faka i-URL" kufuneka uncamathisele ikhonkco levidiyo kwaye unike "ucofe" ukuze idlale.
Okulandelayo, kufuneka "ucofe" kwizixhobo> Ulwazi lweCodec kwaye ukope ulwazi oluvela kwindawo "yendawo". Emva koko ikhonkco elikhutshelweyo linamathiselwe kuyo nayiphi na into isikhangeli kwaye iqhosha lokungena "licofiwe." Kufuneka inikwe "konqakrazo ekunene ”kwividiyo kwaye ukhethe u-“ save as ”. Ngokukhawuleza ividiyo iqala ukukhuphela kwifomathi ye-MP4.
Izibonelelo zabasebenzisi beTyhubhu yakho
Ngenxa yesiqalo kunye nomgangatho weevidiyo zeYou Tube, uninzi lwabasebenzisi lutsala umdla wokufunda indlela yokukhuphela umculo wabo, abanethemba lokuba bazokwazi ukukwenza ngokukhululekileyo, ngokulula, ngokukhawuleza nangokungabinabungozi. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwe te knoloji Ifuna amava athile kwaye eyona misebenzi iphambili yamanye ala maphepha kufuneka iphononongwe ngononophelo.
Njengoko i-You Tube ifumaneka kubo bonke abasebenzisi, baninzi abantu abangena kuyo platform ngaphandle kolwazi lwangaphambili lwehlabathi lekhompyuter, yiyo loo nto kufuneka ukuba uzimisele ukufunda kwaye ube nomonde, xa itekhnoloji inokuba nzima ngesizathu esithile.
Nje ukuba umculo yevidiyo yeYouTube, abasebenzisi banokuyonwabela nanini na befuna. Kubalulekile ukuvavanya enye indlela enikezelwa yi-You Tube, i-portal eye yenye yezona zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela.
1 Khuphela iividiyo ezivela kuwe ngeTyhubhu ukuya kwiKhompyuter
2 Izibonelelo zabasebenzisi beTyhubhu yakho
Meyi 9, 2021
Uyisebenzisa kanjani iYouTube kwintengiso ekwi-Intanethi?
Uyikhuphela njani ividiyo yeYouTube mahala?